သိန်းသုံးဆယ်လောက်ကျမယ် နှစ်ဆယ့်ရှစ်နဲ့လုပ်ပေးမယ်တဲ့ (ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပေါ်က ရင်နာစရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်) - သတင်းရွာ
သိန်းသုံးဆယ်လောက်ကျမယ် နှစ်ဆယ့်ရှစ်နဲ့လုပ်ပေးမယ်တဲ့ (ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးပေါ်က ရင်နာစရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်)
admin · Posted on August 15, 2019
ကျွန်တော်ကိုတစ်ခုလောက်ဒီစာလေးကိုရှယ်ပေးစေချင်တယ် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအမေဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် နှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတ တို့ထံ
ဒီအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရေးဖို့စဉ်းစားတိုင်းသူတပါးကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးနဲ့ပြန်လည်တွေးပေးမိပါတယ် ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမှမအားတာကတကြောင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်တွေးမိတိုင်းစိတ်ထဲမှာ
ကျွန်တော့်အကို ကို လက်လွတ်စပါယ်လုပ်လိုက်သောသူများအကြောင်းတွေးမိတိုင်းမဖြေဆည်နိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။နောင်လာနောက်သားများလည်းဒီလိုအဖြစ်မျိူးမဖြစ်စေချင်ပါ။
အဖြစ်ကဒီလိုပါ ကျွန်တော့်အကိုနာမည်က ရန်နိုင်ထွန်း ပါ။နှလုံးအဆို့ကျဉ်းလို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး မှာတက်ရောက်ကုသခဲ့ပါတယ် ။
OPT ပြနေတာကတော့2နှစ်နီးပါးတော့ရှိပြီ။အဲ့တာနဲ7.1 2019 မှာနှလုံးခွဲစိတ်ဆောင်အပေါ်ထပ် အဆောင်4မှာအရင်ဆုံးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီအခန်းမှာနှစ်ကျော်ပတ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီးအဆောင်3မှာပြောင်းရပါတယ် လူကတော့လှုပ်ရှားမှုများရင်အသက်ရှုနည်းနည်းကြပ်တာကလွဲလို့စားနိုင် သောက်နိုင်သွားနိုင်ပါတယ်။
အဆောင်3 မှာတပါတ်ကျော်ကြာပြီး sister မကြီးတွေကိုအခန်းဘွတ်ကင်ရိုက်ပြီး အခန်းမရမီ ခွဲစိတ်လူနာများနဲ့ရက်နီးလာသောလူနာများအဆောင်2ကိုထပ်ပြောင်းရပါတယ်
တပါတ်လောက်ကြာတော့ အခန်း ဘွတ်ကင်ရိုက်တာရရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ အခန်း ( ဃ ) မှာပြောင်းပြီးလိုအပ်သောဆေးဝါးကုသမှုများကိုမှာကြားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လူနာကလည်းစားနိုင်သောက်နိုင်သွားနိုင်နဲ့ပါ။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် အကို “ရန်နိုင်ထွန်း´´ခွဲမယ့် 6.2.2019 ရက်ကိုရောက်လာပါတယ်။
နောက်ပြီး Sister အပြာဆရာမကြီးကို ကျွန်တော့်အကိုခွဲစိတ်ရင်ဘယ်လောက်ကျမလဲမေးကြညိ့တော့ သိန်း 30 လောက်ကျမယ်မခွဲခင်ဆရာကြီးအခန်းထဲခေါ်ပြောလိမ့်မယ် လို့ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကိုအကြောင်းကြားပြီးငွေရှာထားဖို့ပြောတော့ ကျွန်တော့်အမေ ရှိစုမယ့်စုလေး လက်ကောက်6ကွင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါင်တာ 15 သိန်းရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်နော်အမ ကိုလည်းပြောပြပေါ့ဗျာ။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ခွဲမယ့်ရက်မတိုင်မီ တရက်ကဆရာကြီးကခေါ်တွေ့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့် တတိယမြောက်အကိုကိုလှမ်းခေါ်ရတာပေါ့ ။
အကိုရယ် ကျွန်တော်ရယ် ဆရာကြီးနဲ့မတွေ့ခင် “အကိုငယ်လေး သိန်း 30 ပါလာလားမေးတော့ 15 သိန်းဘဲပါလာတယ် မနက်ဖြန်မှလိုတာပေးလိုက်မယ်ကွာငွေက အဆင်မပြေလို့ပြောတော့
အမ ကလည်းမနက်ဖြန်မှလွဲပေးမယ်ပြောတယ် ´ဆိုတာနဲ့ aww ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတွေတောင် တဝက်ပေးရင်ခွဲပေးသေးတာ
ပြည်သူ့ဆေးရုံကဆရာကြီးတွေဘဲအဆင်ပြေမှာပါ “ဆရာကြီး´´အကျိူးအကြောင်း ပြောပြရင်ရမှာဘဲဆိုပြီး အားကိုးတကြီးနဲ့ ဆရာကြီးအခန်းထဲ ကျွန်တော်တို့ညီအကိုနှစ်ယောက်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိက နေရာရောက်ပါပြီ။ ဆရာကြီးနဲ့စတွေ့ပြီးဆရာကြီးက sister အပြာဆရာမ ကလှမ်းပေးတဲ့ကျွန်တော်အကို ဆေးမှတ်တမ်းတွေကိုသေချာကြည့်ပါတယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို သိန်း 30 လောက်ကျမယ် 28 သိန်းနဲ့လုပ်ပေးမယ်ပြောပါတယ် ။
ဟာကျွန်တော်တို့ညီအကိုလည်း ဝမ်းသာမိတာပေါ့2သိန်း လောက်လျော့ပေးတော့။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာမကပိုက်ဆံပေးဖို့မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲနဲ့ပြတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း “ဆရာကြီး ကျွန်တော်တို့မှာ ပိုက်ဆံက 15 သိန်းဘဲပါလာပါတယ် လိုတာကိုမနက်ဖြန်မခွဲခင်အမီပေးပါ့မယ်´ပြောလိုက်မိပါတယ်။
ဆရာကြီးက မျက်နှာကြီးပျက်ပြီး “ဆရာမကိုသူတို့ကိုမပြောထားဘူးလားလို့´´မေးတယ်။ ကျွန်တော်ကပြောထားပါတယ်ဒါပေမယ့်အချိန်အတိုအတွင်းအဆင်မပြေလို့ပါ မခွဲခင်လာပေးပါ့မယ်လို့ပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောလည်းထင်လည်း ဆရာကြီးတို့ကဈေးရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး ´´လို့ပြောတယ် စိတ်ထဲတော့တော်တော်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ။
အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးက အကုန်မပေးနိုင်ရင် ရက်ကိုနောက်ဆုတ်လိုက်မယ်.. ပြည့်မှခွဲပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။
အဲ့ဒါနဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်ပြန်ထွက်လာပြီးတိုင်ပင်ကြတယ် အဲ့ဒါဆိုလညိး မနက်ဖြန်မရရအောင်အကုန်စုပြီးရှာကြရမှာပေါ့ကွာ လို့ပြောရင်းခေါင်းငိုက်ပြီးထွက်ခဲ့ရတယ်။
ဆေးရုံမှာတလကျော်နေလာတော့ငွေက မနည်းကုန်နေပြီလေ ။
အဲ့ဒါနဲ့ 5.2.2019 နေ့က ငွေအပြည့်မချေနိုင်တော့ 6.2.2019 မှာအပူအပြင်းရှာ အမ ကငွေလှမ်းပို့တော့ 28 သိန်းတိတိ ကိုဆရာကြီးလက်ထဲအရောက်ပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ငွေအပြည့်ပေးတော့ဆရာကြီးမျက်နှာက ဝင်းသွားပြီးမနက်ဖြန် 7.2.2019 မှာ japan တွေလာမယ် သူတို့ခွဲမယ့်အချိန်ထဲထည့်ပေးမယ် ဆိုပြီးပြောတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းသာမိတာပေါ့ ။
အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်က ဆရာကြီးနဲ့Japan ဆရာတွေ ဆရာမတွေ စားဖို့ ပီဇာ နဲ့ဟန်ဗာကာဝယ်လာပေးပြီးကန်တော့ချင်လို့ပါ လို့ခွင့်တောင်းရတယ်
ကိုယ့်လူနာပိုပြီးဂရုစိုက်ရအောင်လေ။ငါ့ အကို ကျမှ japan တွေနဲ့ဆရာကြီးအတူတူခွဲမှာဆိုတော့ကံထူးလိုက်တာလို့ အများအရှေ့မှာကြွားမိတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့မိတယ်။
လူနာကစားနိုင်သောက်နိုင်သွားနိုင်တုန်း ဒါနဲ့ ခွဲစိတ် ရက် 7.2.2019 ကြာသပတေး နံနက် 9:00 မှာခွဲစိတ်ခန်းထဲဝင်ဖို့အဝတ်အစားလဲဖို့ဆိုပြီးဆရာမလေးလာခေါ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော့်အကိုကိုခွဲစိတ်အဝတ်တွေလဲပေးပြီး“မင်းကတော့ကံထူးပြီ အေးဆေးဘဲ ကိုရန်နိုင်ရေ´´ဆိုပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်ခွဲစိတ်ခန်းအရောက် သူလည်းပျော်နေတာပေါ့
9:30 လောက်မှာဆရာကြီးခွဲစိတ်ခန်းထဲစဝင်ပါတယ် ။ 10:00 လောက်မှာ japan ဆရာတွေဝင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခန်းဝင်နေတုန်းမနက် 8:30 အရောက်ခေါ်ထားတဲ့သွေးလှူရှင်တွေအတွက်စားဖို့ကျွန်တော်အမြန်စီစဉ်ပေးရ..လိုအပ်တာတွေဝယ်ပေးရ.. ပင်ပန်းမှန်းမသိပျော်နေမိတယ်။
ဆရာကြီးနဲ့ JAPAN ဆရာတွေစားဖို့ ပီဇာ ဆိုင်ကိုအချိန်မှီပြေးဝယ်ပေးပေ့ါဗျာ ။ ကိုယ့်လူနာအဆင်ပြေဖို့ကိုး။အဲ့လိုနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ပေါ့။ (ပြည်သူ့ဆေးရုံလူနာစောင့်ဖူးသူတိုင်းသိကြမှာပါ )
2:30 လောက်ကြာတော့ ခွဲစိတ်ခန်းက ကျွန်တော်အကို ပိုက်တန်းလန်းတွေနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးလို့ပြန်ထွက်လာပြီးခွဲစိတ်ခန်းအရှေ့ဘက် ပိုးသတ်ခန်းမှာထားပါတယ် ။
အဲ့အထိကျွန်တော်ပျော်နေတုန်း အကိုကတော့သတိမရသေးဘူးပေါ့ဗျာ မေ့ဆေးအရှိန် ရှိနေတုန်းကိုး။
ဒါနဲ့ ည 7:30 အထိလည်းသတိမရသေး 8:00 နာရီ9:00 နာရီ မနက် မိုးလင်း ကျွန်တော်တရေးမမအိပ်ရသေး
အဲ့ဒါနဲ့ 7:30 လောက်ခေါင်းတွေမူးလာတော့ရေအမြန်ချိူးပြီး မကြာဘူးဆရာမလေးတစ်ယောက်ပျာရိပျာရာနဲ့ဆရာကြီးခေါ်လို့လိုက်ခဲ့ပါတဲ့ ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူပြီးအမြန်အခန်းထဲလိုက်သွားမိတယ် ။
ဟိုရောက်တော့ ဆရာကြီးက အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ သွေးပေါင်တွေတအားထိုးကျနေပြီတဲ့…ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့တယ် ။
ဆရာကြီးကတော့ထပြန်သွားပြီဆရာမ တွေကိုပြောဆိုပြီး မကြာပါဘူး 11:30 မှာကျွန်တော် အကို ရန်နိုင်ထွန်း 48နှစ်ဆုံးပြီတဲ့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိူးပြောပြချင်တာက ကျွန်တော့်အတွေး ကျွန်တော်အမြင်လေးကိုတင်ပြချင်ပါတယ်
*လူနာကိုမခွဲစိတ်မီ လိုအပ်သောဆေးစစ်ချက်ပြည့်ဝမှ ခွဲခန်းကို ခေါ်ရတာမှုတ်ဘူးလား.* တတ်သိနားလည်သောသူများအနေနှင့်နောက်တချိန်ရောဂါဖြစ်လို့အားကိုးတကြီးနဲ့
ပြည်သူ့ဆေးရုံတက်မိသူများကို စေတနာ မေတ္တာ မုဓိတာ များဖြင့်သေချာဂရုတစိုက်နဲ့ပြည်သူများအပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုပေးနိုင်ကြပါစေ။
ရောက်ရာဘုံဘဝကနေမိသားစုမှ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုသမျှကို အမျှ အမျှ အမျှ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေ။ကိုရန်နိုင်ထွန်း မနက်ဆို ရက်လည်ပြီ ကျွန်တော်အိပ်မပျော်နိုင်ပါဘူး အကို ရာ
Bayan Zyie & Kyaw Swar Min
ကြှနျတျောကိုတဈခုလောကျဒီစာလေးကိုရှယျပေးစခေငျြတယျ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံအမဒေျေါအောငျ ဆနျးစုကွညျ နှငျ့နိုငျငံတျောသမ်မတ တို့ထံ
ဒီအဖွဈကိုကြှနျတျောရေးဖို့စဉျးစားတိုငျးသူတပါးကို ကိုယျခငျြးစာစိတျလေးနဲ့ပွနျလညျတှေးပေးမိပါတယျ ဒါပမေယျ့ဘယျလိုမှမအားတာကတကွောငျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ပွနျတှေးမိတိုငျးစိတျထဲမှာ
ကြှနျတေျာ့အကို ကို လကျလှတျစပါယျလုပျလိုကျသောသူမြားအကွောငျးတှေးမိတိုငျးမဖွဆေညျနိုငျဖွဈနရေပါတယျ။နောငျလာနောကျသားမြားလညျးဒီလိုအဖွဈမြိူးမဖွဈစခေငျြပါ။
အဖွဈကဒီလိုပါ ကြှနျတေျာ့အကိုနာမညျက ရနျနိုငျထှနျး ပါ။နှလုံးအဆို့ကဉျြးလို့ရနျကုနျဆေးရုံကွီး မှာတကျရောကျကုသခဲ့ပါတယျ ။
OPT ပွနတောကတော့2နှဈနီးပါးတော့ရှိပွီ။အဲ့တာနဲ7.1 2019 မှာနှလုံးခှဲစိတျဆောငျအပျေါထပျ အဆောငျ4မှာအရငျဆုံးတကျရောကျခဲ့ပါတယျ
အဲ့ဒီအခနျးမှာနှဈကြျောပတျကြျောကွာမွငျ့ပွီးအဆောငျ3မှာပွောငျးရပါတယျ လူကတော့လှုပျရှားမှုမြားရငျအသကျရှုနညျးနညျးကွပျတာကလှဲလို့စားနိုငျ သောကျနိုငျသှားနိုငျပါတယျ။
အဆောငျ3 မှာတပါတျကြျောကွာပွီး sister မကွီးတှကေိုအခနျးဘှတျကငျရိုကျပွီး အခနျးမရမီ ခှဲစိတျလူနာမြားနဲ့ရကျနီးလာသောလူနာမြားအဆောငျ2ကိုထပျပွောငျးရပါတယျ
တပါတျလောကျကွာတော့ အခနျး ဘှတျကငျရိုကျတာရရှိကွောငျးပွောပါတယျ။ အဲ့တာနဲ့ အခနျး ( ဃ ) မှာပွောငျးပွီးလိုအပျသောဆေးဝါးကုသမှုမြားကိုမှာကွားသညျ့အတိုငျးလုပျဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။ လူနာကလညျးစားနိုငျသောကျနိုငျသှားနိုငျနဲ့ပါ။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကြှနျတျော အကို “ရနျနိုငျထှနျး´´ခှဲမယျ့ 6.2.2019 ရကျကိုရောကျလာပါတယျ။
နောကျပွီး Sister အပွာဆရာမကွီးကို ကြှနျတေျာ့အကိုခှဲစိတျရငျဘယျလောကျကမြလဲမေးကွညိ့တော့ သိနျး 30 လောကျကမြယျမခှဲခငျဆရာကွီးအခနျးထဲချေါပွောလိမျ့မယျ လို့ပွောပါတယျ။
အဲ့ဒါနဲ့အိမျကိုအကွောငျးကွားပွီးငှရှောထားဖို့ပွောတော့ ကြှနျတေျာ့အမေ ရှိစုမယျ့စုလေး လကျကောကျ6ကှငျးကိုကြှနျတျောကိုယျတိုငျပေါငျတာ 15 သိနျးရပါတယျ။အဲ့ဒါနဲ့ကြှနျနျောအမ ကိုလညျးပွောပွပေါ့ဗြာ။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ခှဲမယျ့ရကျမတိုငျမီ တရကျကဆရာကွီးကချေါတှမေ့ယျဆိုတော့ ကြှနျတေျာ့ တတိယမွောကျအကိုကိုလှမျးချေါရတာပေါ့ ။
အကိုရယျ ကြှနျတျောရယျ ဆရာကွီးနဲ့မတှခေ့ငျ “အကိုငယျလေး သိနျး 30 ပါလာလားမေးတော့ 15 သိနျးဘဲပါလာတယျ မနကျဖွနျမှလိုတာပေးလိုကျမယျကှာငှကေ အဆငျမပွလေို့ပွောတော့
အမ ကလညျးမနကျဖွနျမှလှဲပေးမယျပွောတယျ ´ဆိုတာနဲ့ aww ပုဂ်ဂလိက ဆေးရုံတှတေောငျ တဝကျပေးရငျခှဲပေးသေးတာ
ပွညျသူ့ဆေးရုံကဆရာကွီးတှဘေဲအဆငျပွမှောပါ “ဆရာကွီး´´အကြိူးအကွောငျး ပွောပွရငျရမှာဘဲဆိုပွီး အားကိုးတကွီးနဲ့ ဆရာကွီးအခနျးထဲ ကြှနျတျောတို့ညီအကိုနှဈယောကျဝငျခဲ့ကွပါတယျ။
ကြှနျတျောပွောခငျြတဲ့အဓိက နရောရောကျပါပွီ။ ဆရာကွီးနဲ့စတှပွေီ့းဆရာကွီးက sister အပွာဆရာမ ကလှမျးပေးတဲ့ကြှနျတျောအကို ဆေးမှတျတမျးတှကေိုသခြောကွညျ့ပါတယျ ပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ကို သိနျး 30 လောကျကမြယျ 28 သိနျးနဲ့လုပျပေးမယျပွောပါတယျ ။
ဟာကြှနျတျောတို့ညီအကိုလညျး ဝမျးသာမိတာပေါ့2သိနျး လောကျလြော့ပေးတော့။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာမကပိုကျဆံပေးဖို့မကျြနှာရိပျမကျြနှာကဲနဲ့ပွတော့ ကြှနျတျောတို့လညျး “ဆရာကွီး ကြှနျတျောတို့မှာ ပိုကျဆံက 15 သိနျးဘဲပါလာပါတယျ လိုတာကိုမနကျဖွနျမခှဲခငျအမီပေးပါ့မယျ´ပွောလိုကျမိပါတယျ။
ဆရာကွီးက မကျြနှာကွီးပကျြပွီး “ဆရာမကိုသူတို့ကိုမပွောထားဘူးလားလို့´´မေးတယျ။ ကြှနျတျောကပွောထားပါတယျဒါပမေယျ့အခြိနျအတိုအတှငျးအဆငျမပွလေို့ပါ မခှဲခငျလာပေးပါ့မယျလို့ပွောတော့ ကြှနျတျောတို့ကိုဘာပွောလညျးထငျလညျး ဆရာကွီးတို့ကဈေးရောငျးနတောမဟုတျဘူး ´´လို့ပွောတယျ စိတျထဲတော့တျောတျောမကောငျးဖွဈမိပါတယျ ။
အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကွီးက အကုနျမပေးနိုငျရငျ ရကျကိုနောကျဆုတျလိုကျမယျ.. ပွညျ့မှခှဲပေးမယျဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗြာ။
အဲ့ဒါနဲ့ညီအကိုနှဈယောကျပွနျထှကျလာပွီးတိုငျပငျကွတယျ အဲ့ဒါဆိုလညိး မနကျဖွနျမရရအောငျအကုနျစုပွီးရှာကွရမှာပေါ့ကှာ လို့ပွောရငျးခေါငျးငိုကျပွီးထှကျခဲ့ရတယျ။
ဆေးရုံမှာတလကြျောနလောတော့ငှကေ မနညျးကုနျနပွေီလေ ။
အဲ့ဒါနဲ့ 5.2.2019 နကေ့ ငှအေပွညျ့မခနြေိုငျတော့ 6.2.2019 မှာအပူအပွငျးရှာ အမ ကငှလှေမျးပို့တော့ 28 သိနျးတိတိ ကိုဆရာကွီးလကျထဲအရောကျပို့ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ငှအေပွညျ့ပေးတော့ဆရာကွီးမကျြနှာက ဝငျးသှားပွီးမနကျဖွနျ 7.2.2019 မှာ japan တှလောမယျ သူတို့ခှဲမယျ့အခြိနျထဲထညျ့ပေးမယျ ဆိုပွီးပွောတော့ကြှနျတျောတျောတျောဝမျးသာမိတာပေါ့ ။
အဲ့ဒါနဲ့ကြှနျတျောက ဆရာကွီးနဲ့Japan ဆရာတှေ ဆရာမတှေ စားဖို့ ပီဇာ နဲ့ဟနျဗာကာဝယျလာပေးပွီးကနျတော့ခငျြလို့ပါ လို့ခှငျ့တောငျးရတယျ
ကိုယျ့လူနာပိုပွီးဂရုစိုကျရအောငျလေ။ငါ့ အကို ကမြှ japan တှနေဲ့ဆရာကွီးအတူတူခှဲမှာဆိုတော့ကံထူးလိုကျတာလို့ အမြားအရှမှေ့ာကွှားမိတဲ့အထိဖွဈခဲ့မိတယျ။
လူနာကစားနိုငျသောကျနိုငျသှားနိုငျတုနျး ဒါနဲ့ ခှဲစိတျ ရကျ 7.2.2019 ကွာသပတေး နံနကျ 9:00 မှာခှဲစိတျခနျးထဲဝငျဖို့အဝတျအစားလဲဖို့ဆိုပွီးဆရာမလေးလာချေါပါတယျ။
အဲ့ဒါနဲ့ကြှနျတေျာ့အကိုကိုခှဲစိတျအဝတျတှလေဲပေးပွီး“မငျးကတော့ကံထူးပွီ အေးဆေးဘဲ ကိုရနျနိုငျရေ´´ဆိုပွီး ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလိုကျပို့ပေးခဲ့တယျခှဲစိတျခနျးအရောကျ သူလညျးပြျောနတောပေါ့
9:30 လောကျမှာဆရာကွီးခှဲစိတျခနျးထဲစဝငျပါတယျ ။ 10:00 လောကျမှာ japan ဆရာတှဝေငျပါတယျ။
ခှဲစိတျခနျးဝငျနတေုနျးမနကျ 8:30 အရောကျချေါထားတဲ့သှေးလှူရှငျတှအေတှကျစားဖို့ကြှနျတျောအမွနျစီစဉျပေးရ..လိုအပျတာတှဝေယျပေးရ.. ပငျပနျးမှနျးမသိပြျောနမေိတယျ။
ဆရာကွီးနဲ့ JAPAN ဆရာတှစေားဖို့ ပီဇာ ဆိုငျကိုအခြိနျမှီပွေးဝယျပေးပေ့ါဗြာ ။ ကိုယျ့လူနာအဆငျပွဖေို့ကိုး။အဲ့လိုနဲ့ဟိုပွေးဒီပွေးနဲ့ပေါ့။ (ပွညျသူ့ဆေးရုံလူနာစောငျ့ဖူးသူတိုငျးသိကွမှာပါ )
2:30 လောကျကွာတော့ ခှဲစိတျခနျးက ကြှနျတျောအကို ပိုကျတနျးလနျးတှနေဲ့ခှဲစိတျပွီးလို့ပွနျထှကျလာပွီးခှဲစိတျခနျးအရှဘေ့ကျ ပိုးသတျခနျးမှာထားပါတယျ ။
အဲ့အထိကြှနျတျောပြျောနတေုနျး အကိုကတော့သတိမရသေးဘူးပေါ့ဗြာ မဆေ့ေးအရှိနျ ရှိနတေုနျးကိုး။
ဒါနဲ့ ည 7:30 အထိလညျးသတိမရသေး 8:00 နာရီ9:00 နာရီ မနကျ မိုးလငျး ကြှနျတျောတရေးမမအိပျရသေး
အဲ့ဒါနဲ့ 7:30 လောကျခေါငျးတှမေူးလာတော့ရအေမွနျခြိူးပွီး မကွာဘူးဆရာမလေးတဈယောကျပြာရိပြာရာနဲ့ဆရာကွီးချေါလို့လိုကျခဲ့ပါတဲ့ ကြှနျတျောလညျးစိတျပူပွီးအမွနျအခနျးထဲလိုကျသှားမိတယျ ။
ဟိုရောကျတော့ ဆရာကွီးက အခွအေနမေကောငျးတော့ဘူးတဲ့ သှေးပေါငျတှတေအားထိုးကနြပွေီတဲ့…ကြှနျတျောဘာလုပျလို့လုပျရမှနျးမသိဖွဈနခေဲ့တယျ ။
ဆရာကွီးကတော့ထပွနျသှားပွီဆရာမ တှကေိုပွောဆိုပွီး မကွာပါဘူး 11:30 မှာကြှနျတျော အကို ရနျနိုငျထှနျး 48နှဈဆုံးပွီတဲ့ ဒီလိုဖွဈရပျမြိူးပွောပွခငျြတာက ကြှနျတေျာ့အတှေး ကြှနျတျောအမွငျလေးကိုတငျပွခငျြပါတယျ
*လူနာကိုမခှဲစိတျမီ လိုအပျသောဆေးစဈခကျြပွညျ့ဝမှ ခှဲခနျးကို ချေါရတာမှုတျဘူးလား.* တတျသိနားလညျသောသူမြားအနနှေငျ့နောကျတခြိနျရောဂါဖွဈလို့အားကိုးတကွီးနဲ့
ပွညျသူ့ဆေးရုံတကျမိသူမြားကို စတေနာ မတ်ေတာ မုဓိတာ မြားဖွငျ့သခြောဂရုတစိုကျနဲ့ပွညျသူမြားအပျေါဆေးဝါးကုသမှုပေးနိုငျကွပါစေ။
ရောကျရာဘုံဘဝကနမေိသားစုမှ ကောငျးမှုကုသိုလျပွုသမြှကို အမြှ အမြှ အမြှ ချေါဆိုနိုငျပါစေ။ကိုရနျနိုငျထှနျး မနကျဆို ရကျလညျပွီ ကြှနျတျောအိပျမပြျောနိုငျပါဘူး အကို ရာ
NLD ပါတီ ဗဟိုသုတေသနအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ရာထူးတာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းခံရသည့် ဦးမျိုးရန်နောင်သိမ်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
မနေ့ညက လားရှိုးအနီး တိုက်ပွဲတွင် အရပ်​သားတစ်​ဦး ထပ်​မံသေဆုံး
မွေးစားခွင့်ဥပဒေမှာ အားနည်းချက်တွေများစွာရှိကြောင်း ပြောခဲ့မိသူ ပါတီမှ ထုတ်ပယ်ခံရ
တိုက်ခိုက်မှုများကို မည်သည့်ဘက်ကလုပ်လုပ် ရှုတ်ချကြောင်း ဒေါက်တာမျိုးညွှန့်ပြော
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၇ဝ ခန့်ခေါ်ယူ၊ တလလုပ်ခ လစာကျပ် ၁၉ သိန်းခန့် ရရှိမည်
admin · Posted on August 18, 2019 August 18, 2019